Agwaetiti Faroe, ebe njedebe na Denmark | Akụkọ Njem
Agwaetiti Faroe, njedebe na Denmark
Mariela Carril | | Denmark, Islands
Ọ bụrụ na-amasị gị njem njem njem, n'èzí na Nature gbara ya gburugburu, njem nleta a bụ maka gị: Faroe Islands. Ọ bụ otu agwaetiti mara mma Denmark.
Ha na-mara dị ka "agwaetiti nke atụrụ", na-a ngụkọta nke Agwaetiti 18 dị na North Atlantic. N'ebe a, ị nwere ike ịgbago, gbagoo ugwu, lelee nnụnụ, gbagoo igwe kwụ otu ebe, gbanye mmiri, azụ, sọfụ, gbagoo ma nwee ọmarịcha ikuku mpaghara. Gaba?
2 Gaa na agwaetiti Faroe
3 Ihe ị ga-ahụ na agwaetiti Faroe
Agwaetiti dị iche iche dị ihe dị ka narị kilomita abụọ n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ Skọtland, ọkara ụzọ n'etiti Iceland na Norway. Ha abụrụla akụkụ nke Alaeze Norway ruo oge ụfọdụ mana taa ha sitere na Denmark, dị ka mpaghara na-enwe nnwere onwe.
Agwaetiti dị iche iche ha bụ okwute okwute ha, ha nwere ugwu ndị siri ike, na-eku ikuku, na igwe ojii ebighi ebi na mbara igwe ha, oyi otutu oge. Dị ka anyị kwuru na mbụ, enwere ngụkọta nke agwaetiti 18, ọ bụ ezie na e nwere ihe karịrị agwaetiti 700. E hiwere ha ihe dị ka nde 60 afọ gara aga, site n'ọrụ mgbawa nke mgbe ejikọtara ya na Greenland.
Gaa na agwaetiti Faroe
Nweta ebe a kwa mfe, n’agbanyeghi uzo di anya ha. Enwere ike iru ya Site na ụgbọ elu site n'ọtụtụ ebe: Paris, Reykjavik, Edinburgh, Bergen, Copenhagen na kwa, dabere na oge, ụgbọ elu si Barcelona, ​​Gran Canaria, Mallorca, Malta, Crete ...
Airgbọ elu ụgbọ elu na-efega agwaetiti ndị ahụ Scandinavian ụgbọ elu na Atlantic Airways na ịbịaru nso ebe ị na-aga ụgbọ elu, obere oge ụgbọ elu gị. Dịka ọmụmaatụ, site na Bergen ma ọ bụ Edinburgh, n'ime otu awa ị nọ ebe ahụ. Na njedebe, site n'ụgbọ mmiri Ee ị nwere ike ịga ebe ahụ mana site na Iceland ma ọ bụ Denmark. Ọ bụ nwayọ nwayọ, mana ọmarịcha, n’elu ụgbọ Smyril.
N’ezie, ọ bụrụ n’ikpebie ịba n’ụgbọ mmiri ma nye onwe gị ihe uto, njem a nwere ike ịdị ihe dị ka euro 700. Ọ bụ ihe dị ka ọnụego iji gaa n'August nke afọ a na nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị. Gburugburu njem, ee, otu onye, ​​na-enweghị ụgbọ ala, yana ụfọdụ ihe okomoko n'ihi na ọnụahịa ahụ ka ị na-eme njem n'otu ụlọ.
Ndị na-eme njem n'ụgbọ mmiri na-ejikarị ụgbọ ala ha abịa, mana ọ bụrụ na ị ga-eji ụgbọ elu bịa otu ugboro n’agwaetiti ahụ, inwere ike ịgbazite otu ma ọ bụ ọgbatumtum ma ọ bụ mọzụm. Agwaetiti jikọtara nke ọma ụzọ gasị na akwa mmiri na ọwa mmiri ya mere, ọ dị mma ịga gburugburu ebe a. E nwere ọdụ maka jupụta mmanụ ụgbọala mana ị ga-amarịrị nke anya dị n'etiti ha iji fanye n'oge. Banyere ọwara n'okpuru oke osimiri, ha abụọ nwere nsogbu, nke DKK 100, ihe dị ka euro 13 maka ịgagharị.
Otu n'ime tunnels, ihe Ọbara, jikọtara agwaetiti Vágar, ebe ọdụ ụgbọ elu dị, na agwaetiti Streymoy. Nke ọzọ, Noraoyatnilin, jikọtara agwaetiti Boraoy na nke Eysturoy. Ha enweghi ulo ubochi nke ego ma obu otu a na akwu ugwo na ebe mmanu, n'ime ubochi ato nke eji eji oghere.
Mmadụ enwere ike iji ụgbọ njem ọha na-agagharị? Ee ọ dị mma ma dịkwa ọnụ ala. Steeti na-enye ụfọdụ ego enyemaka ma na-eri DKK 15. Enwere kaadị ọtụtụ njemDịka ọmụmaatụ, maka DKK 500 ị nwere ike ịga njem ụbọchị anọ. A na-eji ha na bọs na ụgbọ mmiri. Enwekwara ụgbọ ala ndị na-eme njem ma ị nwere ike were obere njem helikopta maka DKK 125.
Ihe ị ga-ahụ na agwaetiti Faroe
E wezụga ọrụ anyị nwere ike ịme, saịtị ndị dị a canaa ka anyị nwere ike ịhụ? Agwaetiti niile nwere ihe, akụ, ma ọ bụrụ n’ezie na anyị chere n’agwaetiti n’otu ebe enwere ebe ndị ama ama karịa ndị ọzọ.
Gjôgv bụ obodo dị n'àgwàetiti Eysturoy. Ọ nwere ihe dị egwu 200 mita ogologo ugwu nke ahụ na-esi n’obodo nta ahụ abanye n’oké osimiri. Ọ bụ ebe mara mma, nke ugwu gbara ya gburugburu, ndị na-erughị iri ise bi na ya ụlọ osisi na ahịhịa. Enwere ụzọ dị iche iche iji nwee ọ theụ na nlele, ụlọ tii mara mma, ụlọ ọbịa, na ebe a mara ụlọikwuu.
Obodo ọzọ pụrụ iche bụ Mykines, na otu ụdị ụlọ na ọmarịcha ulo oku na nsọtụ agwaetiti nke Mykineshólmur. Ọ bụ agwaetiti dịpụrụ adịpụ, yana ugwu di elu, ugwu n rollfeghari, oké echiche nke oké osimiri na agwaetiti ndị ọzọ na a paradaịs maka ndị na-enyocha nnụnụ. Ọ bụ ebe dịkarịsịrị anya na agwaetiti Faroe. Buru n'uche na ọ bụrụ na ị gafee n'agbata Mee 1 ruo Ọgọst 31, ị ga-akwụ DKK 100 njem njem n'ụgbọ mmiri ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị gafee obodo nta ahụ, na ọkụ ọkụ, ọzọ DKK 2250. Ego niile bụ maka mmezi. nke ụmụ nnụnụ.
Tinganes bụ ebe akụkọ ihe mere eme nke isi obodo, Tórshavn. O nwere ọdụ ụgbọ mmiri abụọ ma bụrụ nke kacha ochie, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kacha ochie na saịtị niile, ebe enwere ọgbakọ omebe iwu. Nke a mere n’ihe dị ka n’afọ 900 ma ọ bụ nzuko omeiwu Viking nke malitere ka emee oge ọkọchị ọ bụla iji kwurịta nsogbu dị mkpa. Ọ na-adị obere peninsula dị n'etiti, obere ala na-ekewa ọdụ ụgbọ mmiri ụzọ abụọ.
Emebere ma chekwaa etiti akụkọ ihe mere eme, ọ na-echekwa ya niile amara ochie. Ma ị nwekwara ike ịga na saịtị ndị ọzọ dị ka Faroe History Museum, Nordic House, Natural History Museum, National Gallery, Tórshavn Katidral ...
Skansin Ọ dịkwa n'isi obodo ma bụrụ a ochie ochie site na narị afọ nke XNUMX nke nwere ebumnobi nke ichebe obodo ahụ site na mwakpo ndị ohi. N'ezie, ndị ohi mmiri France bibiri ebe mbụ ewusiri ike na 1677, mgbe ha rịsịrị atụrụ 200, nnu abụọ gloves, 500 ụzọ abụọ ... echiche dị egwu banyere oké osimiri.
Otu n'ime akwụkwọ mgbasa ozi kpochapụwo nke agwaetiti bụ Ugwu Vestmanna. Nke a bụ obodo dị n’akụkụ ọdịda anyanwụ nke agwaetiti Streymoy, ọdụ ụgbọ mmiri na-ewu ewu ruo mgbe e wuru ọwara Vágatunnlin. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ka na-ewu ewu maka nnukwu ugwu ya nwere ike iji ụgbọ mmiri gaa leta gị. Nwere ike ịhụ nnụnụ na ọgba ma ị nọ n'ụkwụ ugwu dị larịị na-ewepụ ume gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọtụtụ ebe nkiri nke Agwaetiti Faroe nwere oke osimiri na ụsọ mmiri ya na ndepụta a anyị gbakwunye Beinisvord, ụsọ oké osimiri nke Risin, Kirkjuour ma ọ bụ Lake Sorvágsvatn, "ọdọ na oké osimiri" ma ọ bụ na-adọrọ adọrọ obodo Gjógv nke dị n'akụkụ osimiri. Anaghị m echefu ihe ndị mara mma Mmiri mmiri Múlafossur, n'obodo Gásadalur.
Enwere ihe niile iji hụ ma mee, mgbe niile na-eji ezigbo uwe, mgbe niile na igwefoto dị n'aka, mgbe niile na-emeghe obi iji chekwaa ma chekwaa ọmarịcha ahụmịhe nke nleta a ga-enye anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Denmark » Agwaetiti Faroe, njedebe na Denmark
Ihe ị ga-ahụ na Avilés, Asturias
Ihe ị ga-ahụ na Vietnam